Kulungiswa Indlela Yokuziphatha—Ibonisa Ubungcwele BukaThixo | UBukumkani BukaThixo
Kulungiswa Indlela Yokuziphatha—Ibonisa Ubungcwele BukaThixo
Indlela uKumkani abafundise ngayo abalawulwa bakhe ukuthobela imilinganiselo kaThixo yokuziphatha
Khawube nomfanekiso-ngqondweni wakho ungena kwisango lentendelezo engaphandle yetempile ezukileyo kaYehova yokomoya
1. Yintoni eyabonwa nguHezekile esishiya sibambe ongezantsi?
WAWUNOKUTHINI xa ubona izinto ezabonwa nguHezekile ngexesha awayephila ngalo njengomprofeti? Khawube nalo mfanekiso-ngqondweni: Ufika kwitempile enkulu enobuqheleqhele nebengezelayo. Ulindwe yingelosi enkulu eza kukubonisa le ndawo intle kangaka! Unyuka izitepsi ezisixhenxe uze ufike kwelinye lamasango amathathu ale tempile. Uthi wakuwabona uphelelwe ngamazwi. La masango amalunga neemitha eziyi-30 ubude. Ubona umlindi kwisango ngalinye. Iintsika zona zihonjiswe ngemithi yesundu.—Hez. 40:1-4, 10, 14, 16, 22; 41:20.
2. (a) Ifanekisela ntoni le tempile esembonweni? (Funda nombhalo osemazantsi.) (b) Sinokufunda ntoni kwizinto ezikumasango ale tempile?
2 Lo ngumbono wetempile yokomoya. UHezekile uyichaza ngokweenkcukacha kangangokuba uthetha ngayo ukusuka kwisahluko se-40 ukusa kwese-48 sencwadi yakhe yesiprofeto. Le tempile ifanekisela ilungiselelo likaYehova lonqulo olunyulu. Nto nganye ekuyo inento eyithethayo ngonqulo lwethu kule mihla yokugqibela. * Amasango ayo aphakamileyo amela ntoni? Asikhumbuza ukuba abo bangena kwilungiselelo likaYehova lonqulo olunyulu bamele baphile ngemilinganiselo kaThixo ephakamileyo neyobulungisa. Kwanemizobo yemithi yesundu inentsingiselo efanayo, kuba ngamathub’ athile amasundu amela ubulungisa eBhayibhileni. (INdu. 92:12) Abalindi bona bamela ntoni? Kucacile ukuba abo bangayithobeliyo imilinganiselo kaThixo, abavunyelwa ukuba bangene kule ndlela yonqulo olunyulu, entle nenik’ ubomi.—Hez. 44:9.
3. Kutheni bekufuneka abalandeli bakaKristu baqhubeke becocwa?
3 Uye wazaliseka njani umbono kaHezekile? Njengoko sifundile kwiSahluko 2 sale ncwadi, uYehova wasebenzisa uKristu ukuze abacoce ngokukhethekileyo abantu bakhe ukususela ngo-1914 ukusa ekuqaleni kuka-1919. Ngaba kwaphelela apho? Akunjalo! Ukutyhubela ikhulu leminyaka edluleyo, uKristu ebeqhubeka ephakamisa imilinganiselo kaYehova engcwele yokuziphatha. Bekufuneka abalandeli bakhe baqhubeke becocwa. Kutheni sisitsho nje? Kungenxa yokuba uKristu ebehlanganisa abalandeli bakhe ebakhupha kweli hlabathi likaSathana lonakeleyo ngokuziphatha, noSathana kwelakhe icala akakhange ayeke ukuzama ukubabuyisela kumgxobhozo wokuziphatha okubi. (Funda eyesi-2 kaPetros 2:20-22.) Makhe sihlolisise izinto ezintathu amaKristu okwenyaniso aye acocwa kuzo ngokuthe ngcembe. Eyokuqala, yindlela acocwe ngayo ngokuziphatha, eyesibini, kukufunda ngelungiselelo elibalulekileyo eliye lenziwa ukuze kugcinwe ibandla licocekile, eyesithathu, kukuthetha ngelungiselelo lentsapho.
Ukucocwa Kwindlela Yokuziphatha Ukutyhubela Iminyaka
4, 5. Liliphi iqhinga ebesoloko elisebenzisa uSathana, yaye liphumelele kangakanani?
4 Abantu bakaYehova bebesoloko befuna ukuziphatha kakuhle, ngendlela yobulungisa. Ngenxa yoko, xa kuphuma imiyalelo ecacileyo ngalo mba, bebesoloko beyamkela. Khawuqwalasele le mizekelo imbalwa.
5 Ukuziphatha kakubi. UYehova wayedale ukuba ibe ngabantu abatshatileyo kuphela abafumana uyolo lokwabelana ngesondo. USathana uvuyiswa kukugqwetha loo njongo intle kaThixo ayenze into engafanelekanga, yaye ulinga ngayo abantu bakaYehova ukuze bangamkholisi uThixo. USathana waphumelela kakhulu kweli cebo ngemihla kaBhileham, yaye uqinis’ unyawo ukulisebenzisa kweli xesha lesiphelo.—Num. 25:1-3, 9; ISityhi. 2:14.
6. Sisiphi isifungo esapapashwa kwiMboniselo, sasisenziwa njani ibe kwakutheni ze siyekwe? (Funda nombhalo osemazantsi.)
6 Isilwa loo migudu kaSathana, iMboniselo kaJuni 15, 1908, yapapasha isifungo esithi: “Ngamaxesha onke nakuyo yonke indawo, xa ndihleli nebhinqa okanye umfana kwindawo engenabantu, ndiza kuziphatha kanye ngendlela ebendiza kuziphatha ngayo xa besikwindawo enabantu.” * Nangona kwakunganyanzelekanga ukuba bathobele eso sifungo, abaninzi basithanda baza babhalisa amagama abo ukuba apapashwe kwiMboniselo. Kwiminyaka kamva, kwabonakala ukuba, ngoxa esi sifungo sasinceda abantu abaninzi, kodwa ngoku sasisiba yinto nje engenamsebenzi; ngoko sayekwa. Nakuba kunjalo, yona imigaqo ephakamileyo yokuziphatha, babesabambelele kuyo.
7. Yiyiphi ingxaki eyathetha ngayo iMboniselo ka-1935, ibe yiyiphi indlela yokuziphatha eyayibethelelayo?
7 USathana waya ehlasela ngamandla. IMboniselo kaMatshi 1, 1935, yayichaza ngokuphandle ingxaki eyayisiya ikhula kubantu bakaThixo. Kucacile ukuba abanye babecinga ukuba ngandlel’ ithile xa besiya entsimini abanasizathu sokubambelela kwimigaqo kaYehova yokuziphatha xa bebodwa. Le Mboniselo yathi: “Umntu makangalibali ukuba asikokuya entsimini nje kuphela eyona nto uYehova ayifunayo. Ekubeni amangqina kaYehova enembopheleleko yokummela, kusemagxeni awo ukumela yena nobukumkani bakhe ngendlela efanelekileyo.” Emva koko eli nqaku lanikela isiluleko esicacileyo ngomtshato nokuziphatha okubi, linceda abantu bakaThixo ukuba ‘balusabe uhenyuzo.’—1 Kor. 6:18.
8. Kutheni iMboniselo ibalaselisa eyona ntsingiselo yegama lesiGrike elithetha ukuziphatha okubi?
8 Kumashumi eminyaka yakutshanje, ngokuphindaphindiweyo iMboniselo iye yabalaselisa eyona ntsingiselo ifanelekileyo yegama elithi por·neiʹa, elisetyenziswe kwiZibhalo zesiGrike nelibhekisela ekuziphatheni kakubi. Intsingiselo yalo ayiphelelanga nje ekwabelaneni ngesondo. Kunoko, eli gama libhekisela kuzo zonke izenzo zokuziphatha okubi, eziquka zonke izinto ezingamanyala ezenziwa kwizindlu zoonongogo. Ngoko abalandeli bakaKristu baye bakhuselwa kwisibetho sokuziphatha kakubi okugqwethekileyo okuye kwaxhaphaka ehlabathini namhlanje.—Funda eyabase-Efese 4:17-19.
9, 10. (a) Nguwuphi umbandela wokuziphatha eyathetha ngawo iMboniselo ngo-1935? (b) Ithini iBhayibhile ngotywala?
9 Ukusebenzisa kakubi utywala. IMboniselo kaMatshi 1, 1935, yaveza omnye umbandela wokuziphatha: “Kuye kwaqapheleka ukuba abanye baya entsimini, baze benze nezinye izabelo entlanganweni besele utywala. IZibhalo zithi iwayini ingasetyenziswa xa kutheni? Ngaba kufanelekile ukusela iwayini ngokude iphazamise inkonzo yethu kwintlangano yeNkosi?”
10 Impendulo esekelwe kwiLizwi likaThixo yathetha ngendlela efanelekileyo yokusebenzisa utywala. IBhayibhile ayikugxeki ukusetyenziswa kwewayini nobunye utywala ngomlinganiselo ofanelekileyo, kodwa ikugxeka ngokuphandle ukunxila. (INdu. 104:14, 15; 1 Kor. 6:9, 10) Mayela nokuba abakhonzi bakaThixo babe nenxaxheba kwinkonzo engcwele besele, bakhunjuzwa kwakudala ngebali loonyana baka-Aron abohlwaywa nguThixo ngenxa yokunikela umbingelelo ongafanelekanga kwisibingelelo sakhe. Kungekudala emva koko, ingxelo ichaza into ekusenokwenzeka ukuba yabangela loo madoda enze into engafanelekanga ngolo hlobo, kuba uThixo wayewanike umthetho owalela bonke ababingeleli ukuba benze imisebenzi engcwele besele. (Lev. 10:1, 2, 8-11) Besebenzisa loo mgaqo, namhlanje abalandeli bakaKristu bayaqiniseka ukuba abayenzi imisebenzi engcwele besele.
11. Kutheni kuye kwaba yintsikelelo kubantu bakaThixo ukuncedwa bakuqonde bhetele ukuba likhoboka lotywala?
11 Kwiminyaka yakutshanje, abalandeli bakaKristu baye bancedwa bazi okungakumbi ngemeko yokuba likhoboka lotywala, okuthetha ukuhlala usele nokubusebenzisa kakubi. Ngenxa yeemfundiso zeBhayibhile ezifika ngexesha elifanelekileyo, abaninzi baye bancedwa babusebenzisa ngendlela efanelekileyo yaye bakwazi ukuzilawula, ukanti abanye baye bancedwa babuyeka ngokupheleleyo. Akakho umntu ofuna ukuvumela utywala buphelise isidima sakhe, bonakalise intsapho yakhe, ngaphezu koko, bonakalise ilungelo lakhe lokuba kunqulo olunyulu lukaYehova.
“Asinamfanekiso weNkosi inuka phuqu icuba okanye ifak’ emlonyeni wayo nantoni na engcolisayo.”—UC. T. Russell
12. Abalandeli bakaKristu babelijonga njani icuba, kwanangaphambi kokuqalisa kwemihla yokugqibela?
12 Ukusebenzisa icuba. Abakhonzi bakaKristu bakugxeka ukutshaya kwanangaphambi kokuba iqalise imihla yokugqibela. Kwiminyaka eyadlulayo, umzalwana osel’ ekhulile uCharles Capen, wabalisa ngokuqala kwakhe ukuthetha noCharles Taze Russell ngasekupheleni kweminyaka yoo-1800. UCapen, owayeneminyaka eyi-13 ngelo xesha, wayekunye nabantakwabo abathathu kwizitepsi zeBible House eAllegheny, ePennsylvania. Njengoko wayedlula kubo, uRussell wababuza: “Niyatshaya makwedini? Kutheni kunuk’ icuba nj’ apha?” Bamqinisekisa ukuba abatshayi. Kodwa umbuzo wakhe wabashiya beyiqonda kakuhle indlela alijonga ngayo icuba. KwiMboniselo ka-Agasti 1, 1895, uMzalwan’ uRussell wagqabaza ngeyesi-2 kwabaseKorinte 7:1, esithi: “Andiboni ukuba icuba eli limzukisa njani uThixo, ndingayiboni nento ezuzwa ngumKristu xa etshaya icuba, enoba lelinjani na. . . . Asinamfanekiso weNkosi inuka phuqu icuba okanye ifak’ emlonyeni wayo nantoni na engcolisayo.”
13. Ukuziphatha kwabantu bakaThixo kwacocwa njani ngo-1973?
13 Ngo-1935, iMboniselo yathi icuba “ngumdiza owenyanyekayo,” yaza yathi akukho mntu olitshayayo okanye olihlafunayo owayenokuqhubeka elilungu lentsapho yaseBheteli, okanye amele intlangano kaThixo ngokuba nguvulindlela okanye umveleli ohambahambayo. Ngo-1973 abantu bakaThixo baphinda bacocwa. IMboniselo kaJuni 1 yathi alikho iNgqina likaYehova elinokuqhubeka lingumzekelo omhle ebandleni ngoxa kwelinye icala liqhubeka nalo mkhwa ungabonisi thando, ungcolileyo nobulalayo. Emva koko, abo bangazange bavume ukwahlukana necuba, bagxothwa ebandleni. * UKristu wayephinde wathath’ elinye inyathelo elibalulekilyo lokucoca abalandeli bakhe.
14. Uthini uThixo ngegazi yaye kwenzeka njani ukuba ixhaphake kangaka into yokutofelwa igazi?
14 Ukusebenzisa kakubi igazi. Phambili phaya ngemihla kaNowa, uThixo wathi ukutya igazi akufanelekanga. Loo nto wayiqinisekisa kuMthetho awawunika uhlanga lakwaSirayeli, waza wayalela nebandla lamaKristu ukuba ‘likhwebuke egazini.’ (IZe. 15:20, 29; Gen. 9:4; Lev. 7:26) Kule mihla yethu, uSathana uye wabangela ukuba abaninzi bangawuthobeli lo myalelo kaThixo. Kwiminyaka yoo-1800 oogqirha babezama ukusebenzisa utofelo-gazi, kodwa emva kokuba kufunyaniswe ukuba igazi liziintlobo ngeentlobo, ukutofelwa kwegazi kwaba yinto exhaphakileyo. Ngo-1937, igazi laqokelelwa laza lafakwa kwiindawo zokuligcina, yaye iMfazwe Yehlabathi II yabangela ukuba kukhuthazwe ngakumbi ukusetyenziswa kwegazi. Kungekudala, laba yinto esetyenziswa kwihlabathi lonke.
15, 16. (a) AmaNgqina kaYehova athini ngokutofela igazi? (b) Kulo mba wokutofelwa igazi nowonyango olungasebenzisi gazi, baye baxhaswa njani abalandeli bakaKristu yaye ube yintoni umphumo?
15 Ngo-1944, iMboniselo yathi ukutofela igazi yenye indlela yokulitya. Kunyaka olandelayo, kwagxininiswa kuloo mbono yeZibhalo yaza yacaciswa. Ngo-1951, kwapapashwa uludwe lwemibuzo neempendulo ezazinceda abantu bakaThixo bakwazi ukuwuxubusha noogqirha lo mba. Ehlabathini lonke, abalandeli bakaKristu abathembekileyo baba nesibindi nangona babegculelwa, beneentshaba yaye betshutshiswa. Esebenzisa intlangano yakhe, uKristu waqhubeka ebaxhasa abantu bakaThixo. Kwapapashwa iincwadana ezinemifanekiso namanqaku akuchaza ngokweenkcukacha oku nanenkcazelo ephandwe kakuhle.
16 Ngo-1979, abanye abadala baqalisa ukutyelela izibhedlele ukuze bancede oogqirha bakuqonde kakuhle ukuma kwethu kulo mbandela, bebanika izizathu ezingokweZibhalo yaye bebachazela nangeendlela zokunyanga ezingasebenzisi gazi. Ngo-1980, abadala abakwizixeko eziyi-39 zaseMerika bawuqeqeshelwa ngokukhethekileyo lo msebenzi. Ekuhambeni kwexesha, iQumrhu Elilawulayo lavuma ukuba kumiselwe iiKomiti Zokunxibelelana Nezibhedlele kulo lonke ihlabathi. Ngaba loo migudu iye yaba nemiphumo emihle ukutyhubela iminyaka? Namhlanje, oogqirha abaninzi—kuquka abotyando—bayasebenzisana nezigulane ezingamaNgqina, behlonela ukhetho lwazo lokungalisebenzisi igazi. Izibhedlele ezininzi zinyanga ngaphandle kwegazi, yaye ezinye zithi olu hlobo lonyango lolona lusemagqabini. Ngaba akuvuyisi ukucinga ngeendlela uYesu aye wabakhusela ngazo abalandeli bakhe kwimigudu kaSathana yokubangcolisa?—Funda eyabase-Efese 5:25-27.
Izibhedlele ezininzi zinyanga ngaphandle kwegazi, yaye ezinye zithi olu hlobo lonyango lolona lusemagqabini
17. Sinokubonisa njani ukuba siyayithanda indlela uKristu aye wabacoca ngayo abalandeli bakhe?
17 Senza kakuhle xa sizibuza oku, ‘Ngaba siyayithanda indlela uKristu aye wabacoca ngayo abalandeli bakhe, ebaqeqeshela ukuba bathobele imilinganiselo kaYehova ephakamileyo yokuziphatha?’ Ukuba kunjalo, masingaze silibale ukuba uSathana usoloko efuna ukuba sihambele kude kuYehova nakuYesu, ngokusenza singayihloneli imilinganiselo kaThixo yokuziphatha. Isilwa naloo mpembelelo, ngothando intlangano kaYehova isoloko isilumkisa ize ibhence iindlela ezimbi zokuziphatha zeli hlabathi. Masihlale sithe qwa, size sizithobele ezo zilumkiso.—IMize. 19:20.
Ukugcina Ibandla Lingenabala
18. Umbono kaHezekile usikhumbuza ngantoni xa sicinga ngabo bavukela uThixo ngabom?
18 Into yesibini eyenziweyo ukuze kuphuculwe ibandla, kukuligcina licocekile. Okubuhlungu kukuba, abanye abantu abavumayo ukuthobela imithetho kaYehova engokuziphatha baze bazinikele kuye bayajibilika. Abanye bade bale ngabom ukuphila ngale mithetho. Bafanele benziwe ntoni aba bantu? Kumbono kaHezekile wetempile yokomoya ekuthethwe ngayo ekuqaleni kwesi sahluko, sithelwa thsuphe ngoko kufanele kwenziwe. Ukhumbule ukuba le tempile yayinamasango aphakamileyo. Kwisango ngalinye, kwakukho abalindi. Kuyabonakala ukuba aba balindi babekhusela itempile ukuze abo ‘bantliziyo zingalukanga’ bangangeni. (Hez. 44:9) Loo nto yenza kucace ukuba unqulo lokwenyaniso lwamkela kuphela abo bafuna ukuziphatha ngokwemithetho kaYehova. Nanamhlanje unqulo lokwenyaniso alwamkeli wonke umndilili.
19, 20. (a) UKristu uye waqhubeka njani ebanceda abalandeli bakhe ukuze bayiqonde kakuhle indlela yokuxoxa amatyala ezono ezinzulu? (b) Ziziphi izizathu ezithathu zokumgxotha ebandleni umoni ongaguqukiyo?
19 Ngo-1892, iMboniselo yathi “ngumsebenzi wethu ukubakhuphela ngaphandle kwebandla lamaKristu bonke abo bangavumiyo, nokuba kungayiphi indlela, ukuba uKristu wazinikela waba yintlawulelo yabo bonke.” (Funda eyesi-2 kaYohane 10.) Ngo-1904, incwadi ethi The New Creation yathi, abo baqhubeka nokuziphatha okubi bayingozi ebandleni. Ngelo xesha, umntu owenze isono esinzulu wayexoxiswa lilo lonke ibandla. Noko ke, yayingaxhaphakanga loo nto. Ngo-1944, iMboniselo yathi ngabazalwana abafanelekayo kuphela abafanele baxoxe amatyala anjalo. Ngo-1952 iMboniselo yacacisa isizathu esiseBhayibhileni sokuseka ikomiti egwebayo, isithi esona sizathu sokususwa kwabantu abangaguqukiyo kukugcina ibandla licocekile.
20 Ukususela ngoko, uKristu uye wanceda abalandeli bakhe bayiqonda bhetele baza bayiphucula indlela yokuxoxa amatyala abantu abenze izono ezinzulu. Abadala abangamaKristu bayaqeqeshwa ukuze baxoxe amatyala ngendlela kaYehova, beqiniseka ukuba bamela ubulungisa ngoxa besiba nenceba. Namhlanje siziqonda kakuhle izizathu ezithathu zokumgxotha ebandleni umoni ongaguqukiyo: (1) ukukhusela igama likaYehova kugculelo, (2) ukukhusela ibandla ukuze lingatyhefwa ngabo benza izono ezinzulu (3) nokunceda umoni aguquke ukuba kunokwenzeka.
21. Ziziphi iindlela ekubonakele ngazo ukuba kuyintsikelelo kubantu bakaThixo ukususwa kwaboni ebandleni?
21 Ngaba uyayibona indlela okubancede ngayo abalandeli bakaKristu banamhlanje ukususwa kwabantu ebandleni? KuSirayeli wamandulo, aboni babedla ngokulutyhefa lonke uhlanga, ibe ngamanye amaxesha babede babe baninzi abenzi bubi kunabo bathanda uYehova. Ngenxa yoko, olo hlanga lwaludla ngokubangela ugculelo kwigama likaYehova aze uYehova alulahle. (Yer. 7:23-28) Kodwa ke namhlanje uYehova unenqwaba yamadoda nabafazi abanokholo lokwenene. Ekubeni aboni abangaguqukiyo begxothwa phakathi kwethu, abakwazi ukusetyenziswa nguSathana ukuze bangcolise ibandla. Akukho nto ingako isidibanisa nabo. Ngenxa yoko, siqinisekile ukuba intlangano iya kuhlala ithandwa nguYehova. Khumbula kaloku esi sithembiso sikaYehova: “Nasiphi na isixhobo esiya kuyilwa nxamnye nawe asiyi kuphumelela.” (Isa. 54:17) Ngaba siyabaxhasa abadala abanomsebenzi onzima wokuxoxa amatyala ekomiti egwebayo?
Ukuzukisa Lowo Ezibizwa Ngegama Lakhe Zonke Iintsapho
22, 23. Kutheni sinombulelo ongazenzisiyo kubazalwana bethu ababephila ekuqaleni kweminyaka yoo-1900? Bubuphi ubungqina esibubonayo bokuba zikho noko izinto eziphathelele intsapho ababefanele bachule ukunyathela kuzo?
22 Into yesithathu abaye bancedwa bayiphucula abalandeli bakaKristu ngumtshato nobomi bentsapho. Ngaba indlela esiyijonga ngayo intsapho iye yaphuculwa? Ewe. Ngokomzekelo, xa sifunda ngabakhonzi bakaThixo ababephila ekuqaleni kweminyaka yoo-1900, kuyasimangalisa ukubona indlela ababezinikele ngayo. Siyixabisa gqitha indlela ekwakubaluleke ngayo kubo ukukhonza uThixo. Sekunjalo, siyabona ukuba zikho izinto ababefanele noko bachul’ ukunyathela kuzo. Njani?
23 Kwakuxhaphakile ukuba abazalwana bamkele izabelo zenkonzo, okanye ezokuba ngabaveleli abahambahambayo ezazibenza bashiye amakhaya kangangeenyanga. Phofu yayininzi into yokungakhuthazwa komtshato kunokuba zisenza iZibhalo, kwangaxeshanye kwakungathethwa kangako ngokwakha imitshato eyomeleleyo. Ngaba kusenjalo nakubalandeli bakaKristu namhlanje? Akunjalo!
Asifanele sisukele izabelo esizifumana kwintlangano de singazihoyi iintsapho zethu
24. UKristu wabanceda njani abalandeli bakhe kumbandela womtshato nentsapho?
24 Namhlanje, asifanele sisukele izabelo esizifumana kwintlangano de singazihoyi iintsapho zethu. (Funda eyoku-1 kuTimoti 5:8.) Ngaphezu koko, uKristu uye waqiniseka ukuba abalandeli bakhe abathembekileyo abasemhlabeni basoloko befumana uncedo olungokweZibhalo ngokuphathelele umtshato nobomi bentsapho. (Efe. 3:14, 15) Ngo-1978 kwakhululwa incwadi ethi Ukwenza Ubomi Bentsapho Yakho Bonwabe. Kwiminyaka eyi-18 kamva kwakhululwa incwadi ethi Imfihlelo Yolonwabo Lwentsapho. Ngaphezu koko, kwiMboniselo kuye kwabhalwa amanqaku amaninzi okunceda abantu abatshatileyo basebenzise imigaqo yeZibhalo emtshatweni.
25-27. Ukutyhubela iminyaka baye bancedwa njani abantwana abangalinganiyo ngeminyaka?
25 Kuthekani ngolutsha? Ukutyhubela iminyaka kuye kwathethwa ngeengxaki zolutsha. Sele kukudala intlangano kaYehova inceda abantwana abakubudala obahlukahlukeneyo, kodwa ke olo ncedo, olwalukade lufana namathontsi nje emvula luye lwaba ngumlambo. Ngokomzekelo, ukususela ku-1919 ukusa ku-1921, kwi-The Golden Age kwakusoloko kukho inqaku lesiNgesi elithi “Juvenile Bible Study.” Kwathi ke ngo-1920 kwaphuma incwadana eyayisithi The Golden Age ABC, kwaza kwalandela ethi Children ngo-1941. Phaya koo-1970 kwakhululwa incwadi ethi Ukuphulaphula Kumfundisi Omkhulu, ethi Ubutsha Bakho—Ukufumana Okona Kulungileyo Kubo kunye nethi Incwadi Yam Yamabali EBhayibhile. Ngo-1982, kuVukani! kwaqalisa ungcelele lwamanqaku anomxholo othi “Imibuzo Yabantu Abaselula.” La manqaku ahlahl’ indlela yencwadi ethi Imibuzo Yabantu Abaselula—Iimpendulo Eziluncedo, eyapapashwa ngo-1989.
Incwadana ethi Izifundo Endizifunda EBhayibhileni yamkelwa ngovuyo kule ndibano yayiseJamani
26 Namhlanje sinemiqulu emibini yencwadi ethi Imibuzo Yabantu Abaselula ethetha ngeemeko zale mihla, ngoxa ungcelele lwala manqaku luphuma rhoqo kwiWebhsayithi yethu ethi jw.org. Sikwanayo nencwadi ethi Funda Kumfundisi Omkhulu. IWebhsayithi yethu inentabalala yezinto ezenzelwe ulutsha, kuquka amakhadi abantu abaseBhayibhileni, izinto ezinokwenziwa xa kufundwa iBhayibhile ngabantwana abasebancinane nabo sele beqabukile, iividiyo, amabali eBhayibhile anemifanekiso, kuquka nezifundo zeBhayibhile zabantwana abaneminyaka emithathu nangaphantsi. Kucace mhlophe ukuba uKristu usabathanda abantwana njengokuba wayenjalo xa wabawola ngeengalo zakhe ngoxa wayesemhlabeni. (Marko 10:13-16) Ufuna abantwana babone ukuba bayathandwa nguThixo yaye bafundiswa kakuhle ngaye.
27 Kwakhona, uYesu ufuna abantwana bakhuselwe kwiingozi. Njengoko eli hlabathi lingcolileyo liye labola bhutyu, ixhaphakile into yokuxhatshazwa kwabantwana. Ngenxa yoko, kuye kwapapashwa amanqaku acacileyo nangagwegweleziyo okunceda abazali bakhusele abantwana babo kulo mkhwa uyingozi. *
28. (a) Yintoni efunekayo ukuze sinqule ngendlela ecocekileyo, njengoko kuboniswe kumbono wetempile kaHezekile? (b) Wena, uzimisele ukwenza ntoni?
28 Ngaba akuchulumancisi ukucinga ngendlela uKristu aye waqhubeka ebaphucula ngayo abalandeli bakhe, ebaqeqesha ukuba bayihloniphe baze bayithobele imithetho kaYehova ephakamileyo ukuze ibancede? Makhe siphinde sibuyele kulaa tempile yabonwa nguHezekile embonweni. Ngaba usawakhumbula amasango ayo aphakamileyo? Kuyinyaniso kona ukuba le asiyotempile yokoqobo. Kodwa ngaba siyibona ngokungathi yeyokwenene? Ukungena kuyo akuthethi kuphela ukuya kwiHolo yoBukumkani, ukuvula iBhayibhile okanye ukuya entsimini. Kaloku ezo zizinto nje ezibonakalayo. Nkqu nomhanahanisi unokuzenza ezo zinto kodwa angaze alubeke kwitempile kaYehova. Noko ke, ukuba senza ezi zinto sibe sithobela imithetho kaYehova ephakamileyo yokuziphatha yaye simnqula ngeentliziyo ezimhlophe, siya kuba singenile kwaye sikhonza kweyona ndawo ingcwele kwezikhoyo—ilungiselelo lokunqula uYehova uThixo ngendlela ecocekileyo! Masilixabise eli lungelo lithandekayo. Kwakhona, masizame kangangoko ukubonisa ubungcwele bukaYehova ngokugcina imithetho yakhe!
^ isiqe. 2 Ngo-1932, Umqulu 2 wencwadi ethi Vindication wabonisa ukuba iziprofeto zeBhayibhile ezithetha ngokubuyiselwa kwabantu bakaThixo kwilizwe labo, ziye zazaliseka namhlanje kodwa kungekhona kuSirayeli wokoqobo, kunoko kuSirayeli wokomoya. Ezo ziprofeto zibhekisela ekubuyiselweni konqulo olunyulu. IMboniselo kaMatshi 1, 1999, yachaza ukuba umbono kaHezekile wetempile wawuthetha ukubuyiselwa konqulo olunyulu, kwaye unenzaliseko ebalulekileyo kule mihla yokugqibela.
^ isiqe. 6 Esi sifungo sasingayivumeli indoda ukuba ihlale nebhinqa endlwini bengaluvulanga ucango—ngaphandle kokuba batshatile okanye bayazalana. Kangangeminyaka esi sifungo sasicengcelezwa imihla ngemihla xa kuqhutywa iTekisi eBheteli.
^ isiqe. 13 Ukusebenzisa kakubi icuba kuquka ukulitshaya, ukulihlafuna okanye ukulilimela ezi njongo.
^ isiqe. 27 Ngokomzekelo, funda isahluko 32 sencwadi ethi Funda Kumfundisi Omkhulu; nephepha 3-11 kuVukani! kaOktobha 2007.
UKristu ukuphucule njani ukuziphatha kwabalandeli bakhe?
Abo balawulwa buBukumkani baye bakhuselwa njani kubantu abona ngabom?
Intlangano kaThixo iye yenza ntoni ukuze incede abantu abatshatileyo kunye neentsapho?
Kutheni sifanele sizimisele ukuphila ngemithetho ekufuneka bayithobele abo bakunqulo olucocekileyo?
Ngaba wakha wadidwa okanye wakruqulwa yincwadi yeLevitikus? Ubuncwane obufumaneka kwiLevitikus kunokukunceda ube ngcwele kunqulo lwakho.
AmaNgqina KaYehova Afundisa Abazali Nabantwana Ukuba Bazikhusele Ekuxhatshazweni Ngokwesondo